ဖျာဖြတ်ခြင်းနှင့် ကြော်ငြာထားသောကာကွယ်ခြင်းပေတံ အွန်လိုင်းမှာယူမှု.
ပင်မ > ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် တွဲဖက်ပစ္စည်းများ >ကြော်ငြာပစ္စည်းများအတွက် အကူထုတ်ကုန်များ >ဖျာဖြတ်ခြင်းနှင့် ကြော်ငြာထားသောကာကွယ်ခြင်းပေတံ
ဖျာဖြတ်ခြင်းနှင့် ကြော်ငြာထားသောကာကွယ်ခြင်းပေတံ 17 ရလာဒ်များ
BUK31,000 - 33,333/pc
แผ่นรองตัด ( A0 ) วัสดุ PVC พร้อมลายเส้นทั้ง2ด้าน, รักษาร่องรอยจากการตัดได้เองโดยอัตโนมัติป้องกันการเลื่อนสำหรับตัดวัสดุ ขนาด 35"
BUK91,495 - 98,382/pc
แผ่นรองตัด (A1) วัสดุ PVC พร้อม ลายนำเส้นทั้ง2ด้าน,รักษาร่องรอยจากการตัดได้เองโดยอัตโนมัติ ป้องกันการเลื่อน สำหรับตัดวัสดุ ขนาด 24" x 35" (90ซ.ม. x 60ซ.ม.) / A1 Self-Healing Non Slip Do
BUK176,142 - 189,400/pc
แผ่นรองตัด สำหรับ ตัดไวนิล,สติ๊กเกอร์ ,ขนาด A3 มีคุณสมบัติ เหนียว ไม่ลื่น ระหว่างการตัด/A3 Non Slip Vinyl Cutter Plotter Cutting Mat with Craft Sticky
BUK15,334 - 16,667/pc
แผ่นรองตัด สำหรับ ตัดรููปแบบ ไวนิล,สติ๊กเกอร์ ,ขนาด A4 มีคุณสมบัติ เหนียว ไม่ลื่น ระหว่างการตัด ซึ่งมาพร้อมกับเส้นลายพิมพ์ /A4 Non Slip Vinyl Cutter Plotter Cutting Mat with Craft Sticky Printed Gr
BUK9,120 - 10,133/pc
Aluminum Protection Ruler With Manual Paper Trimmer(80cm,130cm,150cm)
แผ่นรองตัด,3ชั้น (A1) พร้อม ลายนำเส้นทั้ง2สองด้าน,รักษาร่องรอยจากการตัดได้เองโดยอัตโนมัติ ป้องกันการเลื่อน สำหรับตัดวัสดุ/A1 Non Slip Printed Grid Lines Self Healing Cutting Mat (C Level3Ply)
BUK162,192 - 174,400/pc
ไม้บรรทัดอลูมิเนียม ป้องกันการลื่นไหลสำหรับการตัดวัสดุขนาดมาตรวัด 78.7 นิ้ว ( 200 ซ.ม. )---78.7"(200cm) Anti Slideslip Advertising Aluminum Protection Ruler
BUK137,900 - 153,222/pc
ไม้บรรทัดอลูมิเนียมป้องกันการลื่นไหลสำหรับการตัดวัสดุขนาดมาตรวัด 70.8 นิ้ว (180 ซ.ม.) --- 70.8"(180cm) Anti Slideslip Advertising Aluminum Protection Ruler
BUK123,300 - 137,000/pc
ไม้บรรทัดอลูมิเนียมป้องกันการลื่นไหลสำหรับการตัดวัสดุ ขนาดมาตรวัด 62.9 นิ้ว ( 160 ซ.ม. ) ---62.9"(160cm) Anti Slideslip Advertising Aluminum Protection Ruler
BUK108,700 - 120,778/pc
ไม้บรรทัดอลูมิเนียมป้องกันการลื่นไหลสำหรับการตัดวัสดุขนาดมาตรวัด 51.1"(130cm) --- 51.1"(130cm) Anti Slideslip Advertising Aluminum Protection Ruler
BUK94,200 - 104,667/pc
ไม้บรรทัดอลูมิเนียมป้องกันการลื่นไหลสำหรับการตัดวัสดุขนาดมาตรวัด 39.3 นิ้ว (100 ซ.ม. ) --- 39.3"(100cm) Anti Slideslip Advertising Aluminum Protection Ruler
BUK85,800 - 95,333/pc
ไม้บรรทัดอลูมิเนียมป้องกันการลื่นไหลสำหรับการตัดวัสดุ ขนาดมาตรวัด 27.5 นิ้ว (70 ซ.ม.)---27.5"(70cm) Anti Slideslip Advertising Aluminum Protection Ruler
BUK82,200 - 91,333/pc
အမျိုးအစားကုဒ် : SIT-CS-MT02
အမျိုးအစားကုဒ် : SIC-CM-JWX-3LC-A4
အမျိုးအစားကုဒ် : SIC-CM-JWX-3LC-A3
အမျိုးအစားကုဒ် : SIC-CM-JWX-3LC-A2
အမျိုးအစားကုဒ် : SIC-TJ-CM-90120
အမျိုးအစားကုဒ် : SIC-HL-CM-9060
အမျိုးအစားကုဒ် : SIC-CM-CP-A3
အမျိုးအစားကုဒ် : SIC-CM-CP-A4
အမျိုးအစားကုဒ် : SIT-CS-HY-MT02-DP
အမျိုးအစားကုဒ် : SIT-CS-MT03
အမျိုးအစားကုဒ် : SIC-CM-JWX-3LC-A1
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-PR-HL-006
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-PR-HL-005
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-PR-HL-004
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-PR-HL-003
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-PR-HL-002
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-PR-HL-001
ဖျာဖြတ်ခြင်းနှင့် ကြော်ငြာထားသောကာကွယ်ခြင်းပေတံ လက္ကားဈေးနှုန်း၌ဈေးချထားပါသည်။ ဈေးပေါပေါဖြင့်ဝယ်ယူလိုက်ပါ ဖျာဖြတ်ခြင်းနှင့် ကြော်ငြာထားသောကာကွယ်ခြင်းပေတံ မှ ဖျာဖြတ်ခြင်းနှင့် ကြော်ငြာထားသောကာကွယ်ခြင်းပေတံ ဖြန့်ဝေသူ,အကောင်းဆုံး ဖျာဖြတ်ခြင်းနှင့် ကြော်ငြာထားသောကာကွယ်ခြင်းပေတံ ရောင်းရန်, ကျွန်ုပ်တို့သည် ---- ဖြစ်သည် ဖျာဖြတ်ခြင်းနှင့် ကြော်ငြာထားသောကာကွယ်ခြင်းပေတံ ထုတ်လုပ်သည်,ဖျာဖြတ်ခြင်းနှင့် ကြော်ငြာထားသောကာကွယ်ခြင်းပေတံ ဖြန့်ဝေသည်.